Sida loo yeesho timo qafiif ah - Tilmaamo ku saabsan Ragga Stylish | Ragga Stylish
Xaqiiqdii waad ka daashay timo isku qaab leh. Xitaa haddii ay beddelaan muuqaalkaaga timo jaraha, timaha had iyo jeer waxaa loo dhajiyaa isku jiho waxaadna ku dhamaanaysaa isla muuqaalka. In kastoo laga yaabo inaadan rumaysanayn, helitaanka timo jilicsan ama samaynaya perm, way jirtaa.
Ragga badankood ee raba inay abuuraan timo jilicsan ayaa ah kuwa leeyihiin timo toosan ama muuqaal dabiici ah. Iyada oo leh qalabyada qaabeynta iyo qaar ka mid ah alaabada ku habboon waxaad heli kartaa curl ama mowjad la filayo. Kaliya waxay leedahay timo aan aad u gaabnayn si loo adeegsado ujeedadaada.
1 Sidee loo helaa timo jilicsan?
1.1 Timaha ku xoq qalajiyaha
1.2 Timo timo adiga oo aan caawimaad ka helin qalajiyaha
1.3 Timo jilicsan oo jilicsan
Sidee loo helaa timo jilicsan?
Waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah farsamooyinka aan soo jeedineyno hoosta. Waxaad u adeegsan kartaa habka wax ku oolka ah ee aad ugu isticmaali kartid qalajiyaha waxyaalaha qaarkood, alaabada qaar isticmaal ama farsamooyin yar yar oo fudud oo la isticmaalay noloshiisa oo dhan, xitaa dumarka. Ama aad timo jaraha iyo hel perm. Xulo nidaamkaaga ugufiican si aad wanaag u dareento.
Timaha ku xoq qalajiyaha
Ma aha wax adag in la helo ugu yaraan timo ruxruxo oo aan cadaan lahayn oo leh tillaabooyinkan fudud, gunno ahaan waxaa lagugula talinayaa inaad yeelato ugu yaraan 10 cm timo dhaadheer si loo arko natiijooyinka:
Dhaq timahaaga sidii caadiga ahayd. Haddii aad rabto, waxaad u isticmaali kartaa shaambo gaar ah fuuq-celinta wanaagsan taasna waxay gaar u tahay timaha jilicsan.
Timahaaga qalaji si aad u yarayso biyaha xad dhaafka ah, laakiin iskuday inaadan ka saarin qoyaanka xad dhaafka ah. Ku haynta qoyan aad ayey muhiim u tahay, laakiin la'aanteed. Codso ilaaliyaha kuleylka si looga ilaaliyo timaha kuleylka qalajiyaha.
Ku buufi timahaaga dareere ku saleysan milix. Badeecadani waa mid layaab leh, maadaama ay siiso natiijooyin aad u wanaagsan si ay u siiso waji timaha timaha. Dhanka kale, haddii aadan haysan badeecada ku saleysan milixda badda, waxaad u dalban kartaa xumbo gaar ah curlsyada Waxay u shaqeysaa si wax ku ool ah. Waxaan ka dalban doonnaa badeecadaha xididdada ilaa dhammaadka, iyagoo xargaha ku sameyn doona faraha.
Ku billow inaad timo-qalajiso. Haddii aad haysatid mashiin fidiyaha ah oo aad ku dhajisid qalajiyaha way fududaan doontaa inaad ku darto mugga oo aad u qaybiso kuleylka si siman. Hadeysan arintu sidan aheyn oo aad leedahay biin ganaax ah, ka saar si aad ugu ogolaato qalajiyaha inuu si ballaaran u faafiyo hawada.
Gacmahaaga waxay ka caawineysaa timaha inay fooraraan. Waxaad ku cabbiri kartaa timaha calaacalaha gacantaada si ay u qaadato qaabka ama farahaaga waxaad ku sameysmi doontaa qaabab xargaha lagu dhejiyo.
Ugu dambeyntii waad caawin kartaa ku ilaali muuqaalka jilicsan timaha jel ama nooc kareem jilicsan si aad curlka ugu hayso. Waxaa jira alaabooyin bixiya natiijo dhalaalaysa oo leh muuqaal qoyan ama natiijo matte ah, si ay ugu muuqato wax badan oo dabiici ah.
Timo timo adiga oo aan caawimaad ka helin qalajiyaha
Haddii timahaagu aad u jilicsan yihiin oo ay adag tahay in la qaabeeyo, laga yaabee inaad isticmaasho farsamooyin kale oo loo isticmaalay noloshaada oo dhan. Curlers ama birta lagu duuduubay (sida tuwweeyeyaasha) waa aaladaha ugu fiican ee lagu heli karo muuqaalkaaga.
Waa inaad ku dhaqaaqdaa talaabooyin la mid ah qaabkii hore. Waa inaad ku maydhaa isla alaabooyinka, laakiin markan waad adkayn kartaa timahaaga si ka sii adag. Codso buufinta milixda badda oo timahaaga kala bixi ee tufta ah si loo qalajiyo
Waxaad isticmaali kartaa curlers, Waxaad ku rogi doontaa quful kasta oo leh curlerkiisa u dhigma waxaadna u samayn doontaa sidan oo kale timaha madaxa oo dhan. Si aad u qalajiso timaha waad u oggolaan kartaa inay hawo qallajiso ama aad isticmaasho timo qalajiyaha, inkasta oo xulashadan ugu dambeysa ay qalajin karto timaha wax badan.
Markay timahaaga qalalan yihiin, fur roogayaasha oo mari kareemka wax hagaajiya si curlsadu u sii dheeraato. Waxaad isticmaali kartaa gummies ama waxes.
Haddii ikhtiyaarkaagu yahay isticmaal tuubbooyinka ama birta lagu duuboWaa inaad sameysaa marka timuhu gebi ahaanba qalalan yihiin, waligaa ha ku sameyn timo qoyan maxaa yeelay waad dhaawici doontaa. Xadhig ku samee xarig oo isku laab. Si aad u dhamayso, isticmaal kareemada isku hagaajinaya ee horeyba dib loogu eegay.
Timo jilicsan oo jilicsan
Haddii fikraddaadu tahay inaad hesho perm, Waa inaad u tagto timo-jaraha si uu kaagala taliyo nooca curling ee aad u baahan tahay oo farsamadan cajiibka ah dhaqan gal.
Joogtada ah Waa ikhtiyaarka ugufiican inaad yeelato sugitaan adag, aamin ah oo aad ilaawdo inaad xoqdo timahaaga markasta oo aad dhaqdo, ogaado faa iidooyinkeeda:
Waxaad iloobi doontaa inaad si joogto ah u shanleyso timahaaga si aad u hagaajiso timahaaga. Qaabayntaas waxaad kaliya ku siin doontaa naftaada xoogaa taabasho yar ah oo farahaaga ah, biyo ama xoogaa alaab ah oo hagaajiya.
Waxay kaa badbaadineysaa qaladaadka cimilada oo had iyo jeer waxaad heleysaa muuqaal fiican. Haddii aad isboorti sameysid, aad barkadda dabaasha ama roob ayaa da'ay oo waad qoysay, kaliya u oggolow hawo inay qallajiso timahaagu ma jajaban doono mar walbana waxaad yeelan doontaa muuqaal isku mid ah.
Way ku habboon tahay in la ilaaliyo isla sawirka isla markaana la muujiyo isla timaha jilicsan. Mar dambe ma kici doontid subaxdii waana inaad timahaaga ku aragtaa meel qasan. Laakiin haddii aad jeceshahay inaad yeelato timo jilicsan si joogto ah, waa inaad isticmaashaa farsamooyinka kor ku xusan. Waad akhrisan kartaa maqaalkan taasi waxay kaa caawin doontaa inaad hesho nooca timaha jilicsan ee aad rabto inaad gaarto. Si aad ugu isticmaasho alaabada ugu fiican suuqa, halkan gal oo soo hel kuwa ugu qiimaha badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida loo yeesho timo jilicsan